How to Protect Cracked Heel – My Doctor " );( document.contains ) || document.write( "" );( window.DOMRect ) || document.write( "" );( window.URL && window.URL.prototype && window.URLSearchParams ) || document.write( "" );( window.FormData && window.FormData.prototype.keys ) || document.write( "" );( Element.prototype.matches && Element.prototype.closest ) || document.write( "" );( "objectFit" in document.documentElement.style ) || document.write( "" );
ဒီခတျေကွီးမှာ နဓေ့ဒူဝ လှုပျရှားသှားနကွေရတဲ့ လူသားတှအေဖို့… ကနျြးမာရေးကိုသခြော ဂရုစိုကျဖို့ရာ လိုအပျပါတယျ.. ဒီလိုသှားလာနရေတဲ့ထဲမှ ခန်ဓာကိုယျတဈစိတျတဈပိုငျး ထိခိုကျ ဒဏျရာရတဲ့အခါမှာ နှောငျ့နှေးတာတို့၊ အလုပျမဖွဈလိုကျတာတို့ ရှိတတျပါတယျ… accident ကွောငျ့ ဖွဈစေ၊ ရာသီဥတုကွောငျ့ ဖွဈစေ ဘယျသူမှ ရောဂါ ဒဏျရာတဈခုခု ရခငျြကွမှာ မဟုတျပါဘူး..
ဒီထဲကမှ ခု ဆောငျးရာသီတှငျးဆိုတော့ကာ.. အရပွေား ခွောကျသှမှေု့ ပိုမြားစပွေီး စိတျအနှောကျအယှကျ ဖွဈစတေဲ့ “ဖနောငျ့ကှဲနာ cracked heel” အကွောငျးကို ပွောခငျြပါတယျ…
ခွဖေနောငျ့ကှဲခွငျးဟာ ဒီလို ခွောကျသှခေ့မျြးအေးတဲ့ ရာသီဥတုမြိုးမှာမှ မဟုတျပဲ…
– တနကေုနျ အကွာကွီးရပျရတဲ့သူမြိုးတှေ
– လမျးကွမျးခရီးကွမျး လမျးလြှောကျရသူတှေ
– ဖိနပျ မတျောပဲ စီးမိသူတှေ၊ ဖိနပျနောကျအပှငျ့စီးသူ တှမှောလညျး ကွုံတှရေ့တတျပါတယျ…
ဒါ့ပွငျ အရပွေားနဲ့ ပတျသတျပွီး ရောဂါပွသနာရှိသူတှနေဲ့.. ဆီးခြိုရောဂါ ရှိသူတှမှောလညျး ပိုတှရေ့နိုငျပါတယျ…
ဒီတော့ကာ ဖနှောငျ့ကှဲခွငျး သကျသာဖို့ ဘာတှေ လုပျကွမလဲ ?
– ဆောငျးတှငျး အေးလို့ ရနှေေးနှငျ့ခြိုးရာမှာ အရမျးပူနှေးတဲ့ ရမြေိုးနဲ့ မခြိုးပါနဲ့
– သခြောခွောကျသှအေ့ောငျ သုတျပါ
– ခြိုးပွီးခငျြး moisturizer(အလှဆီ) လိမျးပေးပါ
– ခွဖေနောငျ့ကှဲဒဏျရာတှေ သကျသာစတေဲ့ လိမျးဆေးအလှဆီတှေ အမြားကွီး ထှကျပျေါနပေါပွီ.. ဒါကွောငျ့ မိမိနဲ့ သငျ့လြျောမယျ့ အရာကို ရှေးခယျြလိမျးလို့ရပါတယျ..
– တခြို့ဆပျပွာထဲမှာပါတဲ့ alcohol၊ အမှေးနံ့ နဲ့ တခြို့ ပါဝငျပစ်စညျးတှဟော အရပွေားကို ပိုကွမျးပွီး ဖနှောငျ့ကှဲခွငျးကို ပိုဆိုးစနေိုငျတာမို့ အရပွေားကို နူးညံ့စဖေို့ ထုတျထားတဲ့ ပစ်စညျးတှကေို ရှေးခယျြသုံးသငျ့ပါတယျ..
– အနောကျအပိတျပါတဲ့ ဖိနပျတှကေို ရှေးခယျြစီးသငျ့ပါတယျ.. cotton ခွအေိတျလေးတှေ ဝတျပွီး စီးရငျ ပိုသငျ့တျောပါတယျ.. ဒါပွငျ မိမိမှာ ခွဖေနောငျ့ကှဲနာ ရှိခဲ့ပါက ဖုံတှေ ၊ ကွမျးပွငျတှမှေ တဆငျ့ ရောဂါပိုးမဝငျ့စဖေို့ရာ ကာကှယျပွီးသားလဲ ဖွဈပါတယျ…
– Dead skin ချေါ အရပွေားတဝိုကျမှ မလိုအပျသောအရာတှေ ဖယျခွငျး
– ပိုမို ကောငျးမှနျတဲ့ အသားအရညျထိနျးသိမျး ပစ်စညျး ၊ အလှဆီ သုံးခွငျး
– အနာကှဲကွောငျးကို medical glue ဖွငျ့ ကပျခွငျး
– အနာတဝိုကျ ရောဂါပိုးဝငျနပေါက သငျ့လြျောသော ပိုးသတျဆေး သောကျခွငျး
– bandage ၊ ပလာစတာ ဖွငျ့ အုပျကာခွငျး
– heel pads or cup( ဖိနပျတှငျး ခွဖေနောငျ့နာ သကျသာစသေော ပစ်စညျးမြား )အသုံးပွုခွငျး တို့ ပွုလုပျနိုငျပါတယျ…
ခွောကျသှခေ့မျြးအေးတဲ့ ဆောငျးရာသီမှာ နှေးနှေးထှေးထှေး နနေိုငျကွပွီး ရောဂါ အနာတရ ကငျးဝေးကွပါစလေို့ တောငျးဆု မတ်ေတာ ပွုလကျြ….
ဒီ​ခေတ်​ကြီးမှာ ​နေ့ဓဒူဝ လှုပ်​ရှားသွား​နေကြရတဲ့ လူသား​တွေအဖို့… ကျန်းမာ​ရေးကို​သေချာ ဂရုစိုက်ဖို့ရာ လိုအပ်​ပါတယ်​.. ဒီလိုသွားလာ​နေရတဲ့ထဲမှ ခန္ဓာကိုယ်​တစ်​စိတ်​တစ်​ပိုင်း ထိခိုက်​ ဒဏ်​ရာရတဲ့အခါမှာ ​နှောင့်​​နှေးတာတို့၊ အလုပ်​မဖြစ်​လိုက်​တာတို့ ရှိတတ်​ပါတယ်​… accident ​ကြောင့်​ ဖြစ်​​စေ၊ ရာသီဥတု​ကြောင့်​ ဖြစ်​​စေ ဘယ်​သူမှ ​ရောဂါ ဒဏ်​ရာတစ်​ခုခု ရချင်​ကြမှာ မဟုတ်​ပါဘူး..
ဒီထဲကမှ ခု ​ဆောင်းရာသီတွင်းဆို​တော့ကာ.. ​အ​ရေပြား ​​ခြောက်​​သွေ့မှု ပိုများ​စေပြီး စိတ်​အ​နှောက်​အယှက်​ ဖြစ်​​စေတဲ့ “ဖ​နောင့်​ကွဲနာ cracked heel” အ​ကြောင်းကို ​ပြောချင်​ပါတယ်​…
​ခြေဖ​နောင့်​ကွဲခြင်းဟာ ဒီလို ​ခြောက်​​သွေ့​ချမ်း​အေးတဲ့ ရာသီဥတုမျိုးမှာမှ မဟုတ်​ပဲ…
– တ​နေကုန်​ အကြာကြီးရပ်​ရတဲ့သူမျိုး​တွေ
– လမ်းကြမ်းခရီးကြမ်း လမ်း​လျှောက်​ရသူ​တွေ
– ဖိနပ်​ မ​တော်​ပဲ စီးမိသူ​တွေ၊ ဖိနပ်​​နောက်​အပွင့်​စီးသူ ​တွေမှာလည်း ကြုံ​တွေ့ရတတ်​ပါတယ်​…
ဒါ့ပြင်​ အ​ရေပြားနဲ့ ပတ်​သတ်​ပြီး ​ရောဂါပြသနာရှိသူ​တွေနဲ့.. ဆီးချို​ရောဂါ ရှိသူ​တွေမှာလည်း ပို​တွေ့ရနိုင်​ပါတယ်​…
ဒီ​တော့ကာ ဖ​နှောင့်​ကွဲခြင်း သက်​သာဖို့ ဘာ​တွေ လုပ်​ကြမလဲ ?
– ​ဆောင်းတွင်း​ ​အေးလို့ေ​ရ​နွေးနှင့်​ချိုးရာမှာ အရမ်းပူ​နွေးတဲ့ ​ရေမျိုးနဲ့ မချိုးပါနဲ့
– ​သေချာ​ခြောက်​​သွေ့​အောင်​ သုတ်​ပါ
– ချိုးပြီးချင်း moisturizer(အလှဆီ) လိမ်း​ပေးပါ
– ​ခြေဖ​နောင့်​ကွဲဒဏ်​ရာ​တွေ သက်​သာ​စေတဲ့ လိမ်း​ဆေးအလှဆီ​တွေ အများကြီး ထွက်​​ပေါ်​နေပါပြီ.. ဒါ​ကြောင့်​ မိမိနဲ့ သင့်​​လျော်​မယ့်​ အရာကို ​ရွေးချယ်​လိမ်းလို့ရပါတယ်​..
– တချို့ဆပ်​ပြာထဲမှာပါတဲ့ alcohol၊ အ​မွှေးနံ့ နဲ့ တချို့ ပါဝင်​ပစ္စည်း​တွေဟာ အ​ရေပြားကို ပိုကြမ်းပြီး ဖ​နှောင့်​ကွဲခြင်းကို ပိုဆိုး​စေနိုင်​​တာမို့ အ​ရေပြားကို နူးညံ့​စေဖို့ ထုတ်​ထားတဲ့ ပစ္စည်း​တွေကို ​ရွေးချယ်​သုံးသင့်​ပါတယ်​..
– အ​နောက်​အပိတ်​ပါတဲ့ ဖိနပ်​​တွေကို ​ရွေးချယ်​စီးသင့်​ပါတယ်​.. cotton ​ခြေအိတ်​​လေး​တွေ ဝတ်​ပြီး စီးရင်​ ပိုသင့်​​တော်​ပါတယ်​.. ဒါပြင်​ မိမိမှာ ​ခြေဖ​နောင့်​ကွဲနာ ရှိခဲ့ပါက ဖုံ​တွေ ၊ ကြမ်းပြင်​​တွေမှ တဆင့်​ ​ရောဂါပိုးမဝင့်​​စေဖို့ရာ ကာကွယ်​ပြီးသားလဲ ဖြစ်​ပါတယ်​…
– Dead skin ​ခေါ် အ​ရေပြားတဝိုက်​မှ မလိုအပ်​​သောအရာ​တွေ ဖယ်​ခြင်း
– ပိုမို ​ကောင်းမွန်​တဲ့ အသားအ​ရည်​ထိန်းသိမ်း ပစ္စည်း ၊ အလှဆီ သုံးခြင်း
– အနာကွဲ​ကြောင်းကို medical glue ဖြင့်​ ကပ်​ခြင်း
– အနာတဝိုက်​ ​ရောဂါပိုးဝင်​​နေပါက သင့်​​လျော်​​သော ပိုးသတ်​​ဆေး ​သောက်​ခြင်း
– bandage ၊ ပလာစတာ ဖြင့်​ အုပ်​ကာခြင်း
– heel pads or cup( ဖိနပ်​တွင်း ​ခြေဖ​နောင့်​နာ သက်​သာ​စေ​သော ပစ္စည်းများ )အသုံးပြုခြင်း တို့ ပြုလုပ်​နိုင်​ပါတယ်​…
​ခြောက်​​သွေ့ချမ်း​အေးတဲ့ ​ဆောင်းရာသီမှာ ​နွေး​နွေး​ထွေး​ထွေး ​နေနိုင်​ကြပြီး ​ရောဂါ အနာတရ ​ကင်း​ဝေးကြပါ​စေလို့ ​တောင်းဆု ​မေတ္တာ ပြုလျက်​….